Esi gbanwee akara ngosi ọ bụla na Windows 8 | Akụkọ akụrụngwa
Dika anyi matara ihe ohuru usoro Windows 8, anyị na - ahụ ọtụtụ agwa ọma ya. Anyị akọwaala otu esi eme ọtụtụ omume na usoro ihe ọhụrụ a, mana anyị agwabeghị gị otu esi agbanwe akara ngosi nke sistemụ na-eweta na ndabara.
Enwere ọtụtụ ndị ọrụ ga-achọ ka usoro ha ahaziri nke ọma ka ha wee chọọ, yabụ, nwee ike ịgbanwe ohere ọ bụla dị n'etiti ha bụ akara ngosi sistemụ. Taa, anyị ga-akọwa ọtụtụ ụzọ iji rụọ ọrụ a.
Buru n’uche na ịgbanwee desktọọpụ Windows 8 naanị ihe na-agbanwe bụ agba na onyonyo na ụda eji na kọmputa, mana akara ngosi ahụ ka dị otu n’ime “gburugburu” ndị a.
Taa ị ga-amụta otu esi agbanwe akara ngosi desktọọpụ, akara ngosi ihe osise, na akara ngosi maka usoro ihe ndị ọzọ.
1 Ihe ngosi desktọọpụ gị
2 N’ikpeazụ m gbanwere akara ngosi na taskbar
3 Na usoro akara ngosi?
Ihe ngosi desktọọpụ gị
Anyị na-amalite site na nkọwa nke otu esi agbanwe akara ngosi na desktọọpụ Windows 8. N'okwu a, enwere ike gbanwee akara ngosi desktọọpụ n'ụzọ dị mfe na ọ dịghị mkpa iji ngwa ndị ọzọ iji gbanwee ha, naanị anyị ga-eme họrọ akara ngosi, mee nri pịa wee pịa "Njirimara". Ozugbo n'ime akara ngosi akara ngosi anyị na-aga taabụ "Nweta uzo" wee pịa "Gbanwee akara ngosi".
N'ime windo ahụ gosipụtara, anyị nwere ike ịchọ kọmpụta anyị iji họrọ faịlụ maka akara ngosi ọhụụ, nke ga-enwerịrị ndọtị .ICO.
Buru n'uche na ụzọ a nke ịgbanwe akara ngosi dị nwayọ nwayọ ebe ọ bụ na ị ga-eji aka gị mee ya n'otu n'otu. Ọzọkwa, enwere ike ịme ihe a na akara ngosi desktọọpụ.
N’ikpeazụ m gbanwere akara ngosi na taskbar
Mgbe ịkụzịrị gị otu esi agbanwe akara ngosi desktọọpụ na Windows, ka anyị gaa maka akara ngosi taskbar. Iji mee nke a, anyị ga-eji ngwa sitere n'aka onye nrụpụta nke na-eme ka ọ dị maka onye ọ bụla n'efu. Ọ bụ maka ngwa ahụ 7 CONIFIER. Emepụtara ya maka Windows 7, mana ekwenyela ya na ọ dabara na Windows 8 na 8.1.
Obere ngwa a ga enyere anyi aka igbanwe akara ngosi di na taskbar. N'ime ngwa ahụ n'onwe anyị, anyị nwere ụfọdụ akara ngosi akararịị etinyegoro nke anyị nwere ike ịhọrọ.
Iji jiri obere mmemme a ekwesighi ịwụnye ya ebe ọ nwere mbipụta PORTABLE. Iji jiri ihe omume a, ị ga-ebudata ya na peeji nke ndị nrụpụta, mepee ya ma chọọ maka ndị a ga-eme 7CONIFIER.exe nke anyị ga-enye ndị nchịkwa ikike.
Mgbe anyị mepere ngwa ahụ, n'akụkụ aka nri anyị na-ahụ ndepụta nchịkọta nchịkọta nke anyị arụnyere na iji rụọ ọrụ ha naanị pịa otu n'ime ha wee pịa Tee. Buru n'uche na ọ bụ naanị akara ngosi dị na mmanya ahụ gụnyere na ngwugwu ahụ ka a ga-agbanwe, ya bụ, ọ bụrụ na akara ngosi niile ị nwere na mmanya ahụ adịghị na ngwugwu ahụ, naanị ihe ngwugwu ahụ ka a ga-agbanwe, ndi na adighi adi otu.
Ọ bụ ya mere anyị ji enye gị ndụmọdụ ka ị mepụta akara ngosi nke gị, nke ị ga-agagharị na ngwugwu / Mepụta / Site na nhọrọ. N'ebe ahụ ị nwere ike idezi akara ngosi nke ị nwere na mmanya ahụ maka nke a, ị ga-enwerịrị akara ngosi niile ịchọrọ itinye na ndọtị .ICO. Mgbe ahụ ị na-echekwa ngwugwu ma tinye ya dịka anyị kọwara.
Na usoro akara ngosi?
Iji mechaa, anyị na-akọwa otu esi agbanwe akara ngosi sistemụ nke anyị ga-eji ngwa ngwa nke atọ nke ọzọ, dịka ọ dị na mbụ, na-enye anyị ohere itinye nchịkọta akara ngosi dị adị na akara ngosi sistemụ. Ọ bụ ihe omume EkwentịPackager, Stardock software nke na-enye gị ohere itinye akara ngosi akara ngosi zuru oke na sistemụ dum. Ihe omume a abụghị n'efu, mana anyị nwere ike iji ya maka ụbọchị ikpe 30.
Ozi ndị ọzọ - Esi gbanwee akara ngosi mkpirisi na Windows 7
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Esi gbanwee akara ngosi ọ bụla na Windows 8